हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेले पठाए यस्तो सन्देश ! – All top Here
Home/समाचार/हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेले पठाए यस्तो सन्देश !
हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेले पठाए यस्तो सन्देश !
काठमाडौं। आ*त्मह*त्या दुरु*त्साहन अभियोगमा अनु*सन्धानका क्रममा न्यायिक हिरासतमा रहेका कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले हिरासतभित्रबाटै आफू निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश पठाएका छन् । आज आफूलाई भेट्न पुगेका नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुमार्फत उनले यस्तो सन्देश पठाएका हुन् ।
रविलाई भेटेपछि नेता बडुले पनि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकलाई भेटेर घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न आग्रह गरेका छन् । कुनै पूर्वाग्रह नराखी अनुसन्धान गर्न आफूले आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । आफूसँगको भेटमा लामिछानेले निष्पक्ष छानविनमा सघाउन आफू तयार रहेको बताएको बडुले जानकारी दिए ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृ*त्यु प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले लामिछानेसहित युवराज कँडेल र अस्मिता कार्कीलाई प*क्राउ गरेको थियो । शुक्रवार अदालत पेश गरिएका उनीहरुलाई अदालतले थप अनुस*न्धानका लागि भन्दै प्रहरीलाई पाँच दिनको समय दिएको थियो ।
चिप्लिएर बस पल्टियो, २२ जनाको निधन, करिब दुई दर्जन घाइते मृतक सङ्ख्या सक्ने
नेपालमा आजदेखि कोरोनाभाइरस दोस्रो चरणमा प्रवेश